Mudada uu Paul Pogba garoomada ka maqnaanayo oo la shaaciyay Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Mudada uu Paul Pogba garoomada ka maqnaanayo oo la shaaciyay
Mudada uu Paul Pogba garoomada ka maqnaanayo oo la shaaciyay
Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyay in Paul Pogba uu garoomada ka maqnaan doono inta ka dhiman bishan, iyadoo Donny Van De Beek iyo Edinson Cavani ay sidoo kale dhaawac ku seegi doonaan kulanka Man United ee Europe League ee ay la ciyaarayaan Real Sociedad .
Ka dib markii ay ka hareen wareega group-yada Champions League, Red Devils ayaa ku soo laabaneysa ku soo laabashada tartanka heerka labaad ee kubada cagta Yurub.
United ayaa ku wajahan Turin halkii San Sebastian loogu ciyaari lahaa lugta hore ee wareega 32da sababtoo ah saameynta xayiraadaha Covid-19 ee Spain, laakiin Old Trafford ayaa weli martigelin doonta kulanka soo laabashada ee usbuuc ka dib ciyaartii Khamiista ka dhacday garoonka Juventus ee Allianz Stadium.
Laakiin Pogba, sidii la filayay, ma bixi doono safarkaas sababo la xiriira dhaawaca muruqa bowdada oo laga soo qaaday kulankii ay barbaraha 3-3 la galeen Everton 6dii Febraayo.
“Si fiican ayuu u soo kabanayaa, wuxuu bilaabayaa soo kabashadii ugu danbeysay,” ayuu yiri tababaraha United Solskjaer.
“Waxay weli ahaan doontaa toddobaadyo wanaagsan, marka ma ciyaari doono bisha Febraayo, taasi waa hubaal.
Previous articleManchester United oo u aqoonsatay Andre Silva bartilmaameedka suuqa kala iibsiga
Next articleParis Saint-Germain oo ka dhawaajiay qiimaha ay ku dooneyso Kylian Mbappe’